10 प्रेरणादायक उद्धरण भन्दा आफूलाई सुधार गर्न सक्दैन - समाचार नियम
10 प्रेरणादायक उद्धरण भन्दा आफूलाई सुधार गर्न सक्दैन
यो बियर को शायद केही राउंड्स एक सानो कफी वा वा के यो एक कडा दिनको काम पछि आराम गर्न आउँदा आफ्नो हात प्राप्त गर्न सक्छ र कुनै पनि अन्य Booze लिन सक्छ. खैर, हाँ म साथै एक बारे दोषी छु, म वोदका आधा नाङ्गो केही राउंड्स पछि मेरो टाउको माथि वतीको ढक्कन लगाएका मृत पक्रेको छु नभएसम्म! ल, खराब उदाहरण र म मातेका stupor को कि अवस्थामा मेरो बारेमा सपनाहरू प्राप्त गरेपछि यो पढेर सबैलाई क्षमा चाहन्छौं.
बस कसरी भयो नसोध्नुहोस्, कृपया.
तर के साँच्चै रोचक भन्ने कसरी मानिसहरूलाई जीवन सामान्य भाग मार्फत जाने नस-popping तनाव संग जब सामना? मेरो मतलब, जेन वा योग जस्तै नयाँ उमेर कुरा असल कुराहरू एउटै हो र यो वास्तवमा काम गर्दछ. त्यहाँ वास्तवमा गंध गर्न सक्छन् मान्छे को बौद्धिक पक्ष लागि कोठा छ गुलाब-मा--सक्छन् एक चाल जबकि मा? यो तरिका मलाई त्यहाँ साँच्चै यो 'मन-माथि-कुरा मा केहि हुनुपर्छ भन्ने सोच थियो’ कुरा.
हास्य छ साँच्चै सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा छ जब तपाईं. म मतलब जो कोहीले राम्रो पैसा तिर्न सक्छ हास्य अभिनेता सुन्न बस तिमीलाई गाह्रो हाँस्न पछि आफ्नो प्यान्ट गीला गर्न. के को बावजुद भइरहेको गरिसकेका, र ती जो अग्निपरीक्षाहरू हुनत भएको छ, यो एक clouded दृष्टि संग रिस भन्दा स्पष्ट मन संग समस्याहरूको सामना गर्दा बस हाँस्न राम्रो छ. सबै समय मेरो मनपर्ने सेलिब्रेटीहरू एक वुडी एलन हुन सक्छ. अहिले यो जसले तपाईंलाई मा-आफ्नो-अनुहार bluntness उहाँले उत्साह बाहिर खींचती कि दिन्छ एक मान्छे छ, पनि पनि प्रयास बिना. तपाईं केवल मानिस संग केहि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यो विषय नकली गर्न बाध्य गर्नुपर्छ र तपाईंले भन्दा हाँस्न यसको बारेमा दुखी हुनुको अन्त छौँ.
अंग्रेजी: न्यूयोर्क शहर कन्सर्ट मा वुडी एलन. (फोटो क्रेडिट: विकिपीडिया)
वुडी एलन यो भन्न छ:
1. “पैसा गरिबी भन्दा राम्रो छ, मात्र वित्तीय कारण भने।” यो मलाई राम्रो सुनिन्छ, म पैसा समावेश छ मतलब सबै कुराको व्यावहारिकता, तर यो प्राप्त गर्न हात र एक खुट्टा लिन छैन.
2. “म त्यहाँ हेर्दै हामीलाई बाहिर त्यहाँ केही छ भन्ने विश्वास. दुर्भाग्यवश, यो सरकार।” 'Nuff भने.
3. “त्यहाँ मृत्यु भन्दा जीवनमा खराब कुराहरू छन्. के तपाईंले कहिल्यै बीमा विक्रेता संग एक साँझ बिताएका छन्?” यो क्लासिक व्यक्तिहरूलाई हुन हुन्छ. म अर्थ जीवनको सानो समस्या बारे मुद्दा सबै कि खराब छ, सम्म 'उहाँले’ माथि देखाउँछ.
निश्चित, सम्बन्ध जटिल प्राप्त गर्न सक्छन्, वा शायद सम्बन्धको बारेमा कुनै पनि लेखक चाँडै पत्ता लगाउन बाध्य छ कि यसको जटिलताहरू छैन. हामी पालन के हाम्रो हृदय इच्छा, तपाईं हृदयमा रूपमा हृदय कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नभएसम्म आफ्नो शरीर भर रगत पंप कि.
4. “प्रेम जवाफ छ, तर तपाईं जवाफ लागि प्रतीक्षा गर्दा, सेक्स केही राम्रो रोचक प्रश्नहरू उठ्छ।” र तपाईं थप गर्न चाहनुहुन्छ भने, बस मागिरहो!
5. “मौखिक गर्भनिरोधक बारेमा छिटो शब्द. म मेरो साथ सुत्न जाने एक केटी आग्रह, त्यो 'कुनै' भन्नुभयो।” यसलाई सुनिन्छ, 'व्यावहारिक', मलाई लाग्छ.
र यो दैनिक जीवन आउँदा, उहाँले साँच्चै हरेक सम्भव परिदृश्य बाहिर कसरी सर्वश्रेष्ठ बनाउन थाह, उहाँले एक स्नायु प्रहार यदि र यो एक मुद्दा समावेश गर्दैन.
6. “मूलतः मेरो पत्नी अपरिपक्व थियो. म स्नान घर मा हुन चाहन्छु र त्यो मा आउन र मेरो डुङ्गा डुब्नु चाहन्छु।” म कहिल्यै मेरो बाथटब मा एक डुङ्गा अघि थियो. बस यो मा घूर तातो पानी मा soaking मलाई जहाजमा हुने विरामी पहिले नै बनाउँछ गर्दा.
7. “म मृत्यु को डर छैन, म सिर्फ जब यो हुन्छ त्यहाँ हुन चाहँदैनन्।” यदि यो पानी, यो खन्याइदिएकी.
8. “म हास्य लागि आभारी छु, दूध मेरो नाक को बाहिर आउँदा बाहेक।” जब तपाईं beerÖ वा mouthwash मा guzzling हुनुहुन्छ यसलाई खराब प्राप्त गर्न सक्छ, र यो एक पटक मलाई भयो!
9. “तपाईं परमेश्वरको हाँस बनाउन चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो योजना बारे उसलाई भन।” कम से कम त्यो बिजुली हामीलाई Smite छैन, र म लागि आभारी छु.
र को बावजुद के अर्को दस हामीलाई सबै हुन सक्छ, बीस, वा तीस वर्ष, म हामी सबै प्रकाश एक फरक तरिका कुराहरू र बस परिप्रेक्ष्य हेर्न छन् अनुमान. म हामीलाई डोऱ्याउन सक्ने बुद्धि को कुनै पनि टुक्रा बिना जीवन कल्पना जस्तो देखिन्छ सक्दैन. हामी धार्मिक वा हुनुहुन्न कि, यसलाई आफ्नो डर स्वीकार र तिनीहरूलाई कसरी सामना गर्न सिक्न थप साहस लिन्छ यो पनि बस साथ प्राप्त गर्न आउँदा मामला सबै छ.
र कुराहरू योग गर्न, यहाँ तर BYO जान बुद्धि अन्तिम डला छ, जब, र जहाँ हामी हुन सक्छ.
10. “खुसी हुनुको लागि प्रतिभा अधिमूल्यन र तपाईं के लाईक छ, बरु तपाईं के गर्न को।”
21987	0 ए बी सी (सुनको भन्नुहोस्-एक-कथा बुक), Aliveness (मार्शल आर्ट), एनी हल, हाँसो, वुडी एलन
← यम सबैभन्दा विस्तृत स्क्यान [भिडियो] अग्रगामी क्यान्सर उपचार रोग विरुद्ध लड्न प्रतिरक्षा प्रणाली ईन्जिनियरहरु →